“Maro an’isa ny tanora. Miaina vanim-potoana vaovao isika, ary fotoananay izao.” · Global Voices teny Malagasy
“Maro an'isa ny tanora. Miaina vanim-potoana vaovao isika, ary fotoananay izao.”
Voadika ny 07 Jona 2018 4:41 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, English, English
Enrique Franco. Saripikan'i El Churo.
Enrique Franco dia mpikambana ao amin'ny Centro de juventudes de Esmeraldas (Foiben'ny tanoran'i Esmeraldas), fifandaminana iray mandala ny zon'olombelona ao Esmeraldas, Ekoadaoro izay miasa miaraka amin'ny kilonga, tanora, ary ny vondrom-piarahamonina LGBTI. Iray amin'ny asany voalohany ny fandaharana mandeha isan-kerinandro ao amin'ny radio antsoina hoe La Calle Habla (Tafatafa an-dalambe), toerana iray ifanakalozan-kevitra sy iadiana hevitra amin'ireo olana atrehin'ny vondrom-piarahamonin-dry zareo. Ny manaraka etoana dia dika an-tsoratra amin'ny fandraisam-peon'ny fanadihadian'i Enrique’ amin'ny zavon-tenin'ny “joven” (tanora).
Voambolana nibahan-toerana avy amin'ny lahatsoratra 8.811 nivoaka tanelaneran'ny Janoary 2017 sy Avrily 2018 hita niaraka tamin'ny fanononana ny “joven” (tanora) tao amin'ny angona Media Cloud miisa efatra avy amin'ny sehatra famoaham-baovao miteny espaniola ao Ekoadaoro. (Jereo lehibe kokoa ny sary)
Ny ‘tanora’ no zavonteny nosafidianako. Nosafidianako ny voambolana ‘tanora’ satria manana fiantraikany izany ary ny tanora no maro an'isa. Miaina amin'ny vanim-potoana vaovao isika, ary fotoananay izao.
Araka ny zavon-teny, ahoana ny isehoan'ny tanora ao amin'ny famoaham-baovao?
Voambolana maro no mipoitra, voambolana miampanga ny tanora, manaisotra fandrisihana ary mandà izay mety ho fankatoavana ny fandraisan-dry zareo anjara amin'ny fiarahamonina.
Iray amin'ny nanintona ny fifantohako ny voambolana “maty.” Ny marina, mifantoka amin'ny voambolana izay heverin'ny fiarahamonina ho fady ny famoaham-baovao satria ireny no lohahevitra resahana betsaka sy lazaina ho olana mitranga amin'izao fotoana izao. Ny zavamisy, miampanga ny tanora ho olana ry zareo, olona tsy mandray anjara hanabe voho ny fiarahamonina ary tsy mendrika.
Ahoana ny tokony itazanana ny tanora ao amin'ny famoaham-baovao?
Mihevitra aho fa tokony ho tazana ao amin'ny famoaham-baovao ny voambolana tahaka ny tsianavahana, fandraisana anjaran'ny tanora amin'ny fiarahamonina, ny politika vaovaon'ny tanora.
Inona avy ny voambolana tokony miaraka amin'ny “tanora” ao amin'ny zavon-teny?
Fandraisana anjara, taranaka vaovao, faharanitsan-tsaina, ary zavabita vaovao ihany koa.
Ity dia ao anatin'ny andiany Rising Frames narafitra tamin'ny fiarahamiasa akaiky tamin'ny fikambanana El Churo ao Quito, Ekoadaoro. Nikarakara atrikasa ry zareo tao Esmeraldas tamin'ny 4 mey 2018 izay nampiray toerana ireo solontena avy amin'ny fikambanana sy vondrona samihafa mba handinika ny fomba itazanana an-dry zareo na ny lohahevitra tandrovin-dry zareo ao amin'ny angona media Ekoadaoreana ary hamorona tantara ho setrin'izany fitazanana izany.